Messi oo goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay Paris St-Germain xilli kulankii Manchester City iyo Paris St-Germain Xalay | Dayniile.com
Home Warkii Messi oo goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay Paris St-Germain xilli kulankii Manchester...
Messi oo goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay Paris St-Germain xilli kulankii Manchester City iyo Paris St-Germain Xalay
Arbaco: September 29, 2021
Lionel Messi ayaa si qurux badan waxa uu goolkiisii ugu horreeyay ugu dhaliyay kooxda Paris St-Germain xilli ay kooxda Manchester City ku garaaceen ciyaar ka tirsanayd koobka Champions League-ga.
Messi, oo kulankii afraad u dheelay kooxda PSG tan iyo markii uu isaga soo tagay kooxda Barcelona, ayaa kubadda ka jiiday Khadka dhexe iyadoo ay isku dhufsadeen ciyaaryahan Kylian Mbappe, markaas oo goolhaye Ederson uu haleeli waayay dhinac uu goolka ka celiyo, sidaasna uu Messi si cajiib ah shabaqa kubadda u cuksiiyay.
Kooxda Manchester City ayaa abuurtay fursado badan oo ay goolal badan ku dhalin kartay oo kubad uu madaxa la helay Raheem Sternling ayaa birta ku dhacday kaddibna Bernardo Silva ayaa tiirka goolka ku garaacay xilli gooshuna aanay cidina ku jirin.
Todoba jeer ayuuna goolhaye Gianluigi Donnarumma ka hor istaagay kooxda Manchester City inay gool ka dhaliyaan, ciyaartaas oo u aheyd middii ugu horraysay ee PSG ugu safto Champions League-ga.
Saddexdii ciyaar ee hore ee uu Messi u saftay kooxda PSG ayaanay u suuragelin inuu wacdaro dhigo, oo wax gool ah muusan dhalin mana baasin.
Hasayeeshee xalay habeenkiisa ayey aheyd markaas oo wax walba ay isbadaleen, oo kubad uu Mbappe ciribta ugu dhigay ayuu Messi si qurux badan u dabamariyay goolhaye Ederson.
Waa goolkii todobaad ee uu ku dhaliyo shan kulan oo Champions League ah uu kaga hortagay koox uu maamulo Pep Guardiola – tababarihiisii hore ee Barcelona – waxa uuna sidoo kale ahaa goolkii todobaad ee uu ka dhaliyo kooxda Manchester City.
Fursadda kaliya ee uu goolka Messi ku helay waxa ay aheyd goolka uu dhaliyay – hasayeeshee habeen ay kooxda Man City ku qasabtay kooxda PSG inay howl adag qabato, ayaa ruugcaddaagan qeybtiisa ka ciyaaray.
Ku dhawaad saddex meelood oo meel kubadaha uu taabtay qeybta kooxdiisa ayuu ku dheelay, oo ay ku jirtay mar uu Riyad Mahrez ku lagday meel aan sidaas goosha kooxdiisa uga fogayn.
Kooxda PSG oo ku guulaysatay dhammaan ciyaaraha tartanka Ligue 1-ka ee horyaalka Faransiiska ayaa haatan ah koox ka duwan middii laba kulan ay Man City ka adkaatay nus dhammaadka tartankii sanadkii hore.
Previous articleBoqor Cismaan oo ka mid salaadiin Somaliland oo dhaawac u gestay Xildhibaan Nuur oo ka tirsan Golaha Wakiillada
Next articleMark Milley oo ka digay in ururka argagixisada ah ee Al-Qaacida ee ku sugan dalka Afghanistan ay halis ugu noqon karaan Mareykanka
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaliland ayaa ka jawaabtay hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobleee ahaa in Somaliland ay si qasab ah luga soo masaafurisay...